Ukulungiselela iiPermalinks zeWordPress | Martech Zone
Ukulungiselela iiPermalinks zeWordPress
NgeCawa, Agasti 23, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukuqala kwam ukubhala ibhlog, ndakhetha umgangatho Permalink ubume obubandakanya umhla, inyanga kunye nomhla wesithuba:
Njengoko ibhlog yam ikhula ekuthandeni kwaye ndifunda okungakumbi malunga nolwakhiwo lwekhonkco, ndiye ndabona ukuba olu lwakhiwo lunokuba nezinto ezithile:
Abaphandi banokuchonga kwangoko ukuba iposti yebhlog yayindala okanye yakutshanje. Ngubani ofuna ukufunda umxholo wakudala xa kukho into entsha ekhoyo? Ukuba abaphandi banokubona umhla kwisakhiwo se-permalink, banokungahoyi iiposti zakho ezindala nangona zisasebenza.
Ezinye zeengcali zokwenza uphendlo kwiinjini yokukhangela zikholelwa ukuba isahluli ngasinye ("/") sibonisa ulawulo oluphezulu kwifolda ngoko ke ukushiyeka kokukhona, kokukhona umxholo wakho ungabalulekanga kangako (ukungxola okungaphezulu kuthetha ukuba kungcwatyelwe nzulu kubume bolawulo). Ukuba ungagcina iposti nganye ikudidi olunye, icwangcisa umxholo ukuba anyuke amanqanaba ama-2 kulawulo oluphezulu… oko kuthetha ukuba kunokuba kubaluleke kakhulu.
Ezinye iingcali ze-SEO ziyavuma ukuba ukusebenzisa amagama aphambili kwiindidi yeyona ndlela yokusebenza kweinjini yokukhangela. Qiniseka ukuba unika igama iindidi zakho usebenzisa amagama aphambili asebenzayo okanye amabinzana, nangona!
Ngaba ungalutshintsha uLwakhiwo lwePermalink?
Kangangexesha elithile, nangona ndibethwa sisakhiwo se-permalink ekuqaleni ndibeke ibhlog yam kunye… not the case! Ukuba ungathanda ukutshintsha ubume be-permalink, uDean Lee uphuhlise iplagi ethi ivelise ngokuzenzekelayo i-301 eqondisa kwakhona efunekayo ukuyiguqula ukusuka kwisitayile esinye se-permalink ukuya kwenye.
Iphakheji yokubamba emnandi ngenkqubo yolawulo lwendlela eyomeleleyo yokuhambisa kwakhona WPEngine (Yiyo ikhonkco lethu lokudibana). Si kuphuhlise intetho eqhelekileyo Uninzi lwabathengi bethu ukuze bakwazi ukugcina ezinye zegunya lenjini yokukhangela kumaphepha akhoyo ashukunyisiweyo.
Agasti 24, 2009 kwi-4: 10 AM
Ingcebiso egqwesileyo, uDoug. Ndihlala ndicinga ukuba i-WordPress iziphatha ngokuzenzekelayo (kwakhona iDrupal). Ndicinga ukuba bendingalunganga. Enkosi ngokukhomba le plugin iluncedo. Ngoku ndiyazibuza ukuba ndiphinde ndibuyele kwisakhiwo sekhonkco lendawo yam.
Agasti 24, 2009 ngo-2: 48 PM
Ingcebiso enkulu, njengesiqhelo, uDoug.
Agasti 24, 2009 ngo-4: 43 PM
Enkosi ngokwabelana ngolu lwazi uDouglas!
Agasti 28, 2009 ngo-2: 25 PM
Ulwazi olugqwesileyo. Ndicwangcise oku kwibhlog yam… Uluchaza njani ukuba loluphi udidi olusetyenziswa kwi-permalink ukuba ukhetha ngaphezulu kwelinye inqanaba lesithuba?
Ixabiso eliphantsi le-SSL
Jan 5, 2012 kwi-6: 50 AM
-Ngokuphuculwa kweWordPress 3.3 akusabalulekanga ukuqala i-permalink yakho ngenani. Ndenza into yokuba% / igama lomyalezo% lolona khetho lufanelekileyo, nangona ungahambisa ngokulula iiposti / amaphepha kwiindidi ezahlukeneyo ngaphandle kokukhathazeka ngayo nayiphi na imiba.
Izatifikethi ze-SSL ezingamaxabiso aphantsi
Feb 23, 2012 ngo-2: 21 AM
Okokuqala, mandibulele kuwe ngokwabelana ngenqaku elibalulekileyo malunga nokubhloga kweshishini kwaye okwesibini amanqaku akho malunga nokusilela kolwakhiwo lwekhonkco ayasebenza ngokwenene. Siyakhuthaza ngenene ngenqaku lakho kwaye ngoku sikholelwa ekubeni ubume be-permalink busebenza ngokwenene ekufumaneni umdla wabaphandi kunye nokuqwalaselwa kwabo.